Izigodi eziyi-10 ezibaluleke kakhulu emhlabeni | Izindaba Zokuhamba
UMonica sanchez | | Izindawo zokuvakasha, General, Iziqondiso
Ngiyazithanda izigodi. Ziwumbukwane wemvelo oyiqiniso lapho ungavumelana ngokuphelele nemvelo: ulalele imisindo yendawo, uphefumule umoya ohlanzekile nohlanzekile, futhi konke ngenkathi unekhamera yakho uthwebula amakhona akhetheke kakhulu, lezo ezikwenza udlidliziswe yimizwa.
Njengoba kuningi futhi ngeshwa sinempilo eyodwa kuphela ukubavakashela bonke, ngizokutshela okuyizigodi ezibaluleke kakhulu emhlabeni.
2 ILoire Valley
3 IPorsmork Valley
4 IGreat Rift Valley
5 Isigodi Senkosi
6 I-Monument Valley
7 Isigodi saseYosemite
8 isigodi sokufa
9 Isigodi saseWaipi'o
10 Isigodi saseDanum
Sizoqala uhambo lwethu ngokuvakashela oseduzane kakhulu nathi, e-Andorra. I-Incles Valley, ngokuphambene nalokho okungase kubonakale, yamukela noma ngubani ofuna ukukhuphuka izintaba zayo noma ageze emanzini ayo. Ukufinyelela lapho akudingekile ukuba ube nokulungiselela okukhulu ngokomzimba, ngakho-ke kuyindawo ephelele futhi yezingane ezingathola i-marmot noma i-chamois.
Itholakala eFrance, ibizwa ngegama lomfula ogeza osebeni lwazo zonke izifunda: ILoire. Bangamazwe abusisiwe, ngoba kuyisifunda sewayini. Kule ngxenye yomhlaba ungabona iqembu lezinqaba zaseFrance, njengeSaint-Brisson noma iClos-Lucé, zonke zakhiwa ngesikhathi sokuvuselelwa kweFrance.
Uma uphupha ngokuvakashela futhi ukwazi ukugeza ku-geyser ... lapho-ke awukwazi ukuphuthelwa yiPorsmork Valley, e-Iceland. Vele, qaphela ngoba inenhlabathi enamadwala kakhulu. Kepha indawo ebukekayo iyamangalisa, ngakho-ke kufanelekile.
IGreat Rift Valley
E-Afrika sithola iGreat Rift Valley, enokwandiswa kwamakhilomitha angama-4830. Idlulisa izindawo zamazwe ahlukahlukene, zisuka e-Djibouti ziye eMozambique. Yindawo lapho ungaya khona bheka izilwane ezinhlanu ezinkulu zase-Afrika: ibhubesi, ingwe, indlovu, ubhejane nenyathi. Futhi hhayi lokho kuphela, kodwa futhi kwakuyindawo yokuhlala okhokho bethu. Eqinisweni, izinsalela zokuqala ze-hominin zatholakala lapha.
Siyaqhubeka e-Afrika, kulokhu siseSigodini saMakhosi. Empeleni iyi-necropolis ehlala eduze kwaseLuxor. Lapha kwakuphumula oFaro bama-1922, 1979 no-XNUMX amakhosi. Yilapho uHoward Carter athola khona ithuna likaTutankhamun ngo-XNUMX, kwathi emashumini ambalwa eminyaka kamuva, ngo-XNUMX, kwathiwa yiNdawo Yamagugu Omhlaba.
Manje, sithatha indiza silibangise emngceleni oseningizimu we-Utah ne-Arizona, e-United States of America. Kule ndawo, akuzona izitshalo okuyizona protagonists, noma izilwane, kodwa ubuciko bemvelo. Ezinye izithombe zamatshe ezakhiwe ngumoya, ezaqala ukushaya izigidi zeminyaka edlule nokuthi kuze kube namuhla ziyaqhubeka nokuguqula umsebenzi wazo. Impela lapho uya, kuzojwayeleka kakhulu kuwe ukusuka ekuboneni ku-movie yasentshonalanga.
Ingenye yezindawo ezinhle kakhulu ongazithola e-United States. Isigodi saseYosemite yisigodi seqhwa saseCalifornia ezungezwe amahlathi nezintaba, ngasendleleni embozwe okumhlophe njalo ebusika. Kubuye kubhekwe njengeGugu Lomhlaba, kusukela ngo-1984, ngoba uma ngemuva kokuhamba emigwaqweni yaseCalifornia ufuna okuthile okuthulile ... Ngiyaqiniseka ukuthi ngeke kube nzima kuwe ukunqamula kule ndawo enhle kakhulu.
Siyaqhubeka eCalifornia, sivakashele isigodi esingamakhilomitha angama-225 ubude namakhilomitha ayi-8 kuye kwangama-24 ububanzi. Akulungele labo abangakubekezeleli kahle amazinga okushisa, njengoba i-mercury ingadlula kalula u-45ºC. Empeleni, phakathi nekhulu leminyaka elidlule izinga lokubanda elingajabulisi lika-56ºC labhaliswa, ikakhulukazi ngoJulayi 7, 10. Ngakho-ke uma ulinga ukuya, ungakhohlwa ukuletha amanzi, i-sunscreen nesigqoko.
Kepha uma ukhetha ukuya ekhoneni elinesimo sezulu esifudumele, ake siye eHawaii. Isigodi saseWaipi'o (kwesinye isikhathi siphinde sipelwe ngokuthi iWaipio) sitholakala esifundeni saseHamakua, esiqhingini esikhulu seziqhingi. Kumbozwe imvelo evamise ukushisa futhi igezwe ngamanzi acwebile acwecwe lokho mema ukubhukuda. Kodwa ungakhohlwa isambulela, ngoba izimvula zivame kakhulu kule ndawo.
Uma ungumthandi wemvelo futhi ufuna ukubona ihlathi lapho abantu bengazange bashiye uphawu oluningi, sekuyisikhathi sokubhekisa ngaseBorneo, lapho sizophetha khona ngohambo lwethu. Lesi sigodi esihlaba umxhwele sise-83km eningizimu-ntshonalanga yeLahad Datu. Esiqiwini sehlathi esihlanganisa indawo engama-440km2 bukhoma izinhlobo ezingaphezu kwezingama-250 zezinyoni, ama-panther amahle anamafu, ama-macaque nama-orangutan, Phakathi kwezinye izilwane eziningi, ungaxhumana nemvelo njenganini ngaphambili.
Uye waluthanda uhambo?
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » travel » Iziqondiso » Yiziphi izigodi ezibaluleke kakhulu emhlabeni?
Ngiyakukhumbula u-Tafí osuka esigodini sase-Argentina, esifundazweni sase-tucumán. Kuyisigodi sesibili ngobukhulu emhlabeni, kungaba sikhulu kakhulu uma bengakhipha ipelao ecishe ibe maphakathi nesigodi. Futhi ingenye yezindawo eziheha izivakashi esifundazweni!